Gudiga doorashada Puntland oo la kulmay maamulka & bulshada gobolka Bari. – Radio Daljir
Gudiga doorashada Puntland oo la kulmay maamulka & bulshada gobolka Bari.
Bossaso, Jan, 25 – Waxaa maanta kadhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Boosaaso kulan balaaran oo looga hadlayay qaabkii bulshada loo fahsiin lahaa dastuurka cusub ee dowladda Puntland iyo sidii nidaamka xisbiyada badan looga hirgalin lahaa deegaanada Puntland.
Kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay madax katirsan gudiga doorashada Puntland oo uu ka mid yahay siyaasi Barqad Cali Saalax,gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan,kuxigeenka duqa degmada Boosaaso Siciid Cabdiraxmaan,isimo iyo siyaasiyiin.
Siyaasi Muuse Cali Jaamac oo ka hadlay kulanka ayaa waxaa uu ugu horayntii sheegay dastuurka inuu yahay mid ay leeyihiin shacabka Puntland,balse aysan jirin gudi si gaar ah u leh dastuurkan.
Waxaa uu siyaasi Muuse Cali Jaamac uu ku dooday dastuurka inuu xaq u leeyahay guud ahaan shacabka Puuntland ee ku dhaqan miyi iyo magaalo.
“Dastuurka waxaa xaq u leh inuu u codeeyo kii kalluumaysatada ahaa iyo midka kale,waxaana iska leh shacabka oo waa midkii lagu dhaqi lahaa dadwaynaha”ayuu yiri Muuse Cali Jaamac oo inaatsi raaciyay dastuurkan inaysan fahamsanayn bulshada loona baahanyahay in loo qaybiyo qoraalada dastuurka si ay go’aaan uga soo baaran dagaan ayna go’aamana ka qaadan karaan.
Nabadoon Sanwayne oo ka mid ah duubabka dhaqan ee gobolka Bari ayaa sheegay isim ahaan inuusanba la socon waxa uu qeexayo dastuurka cusub ee Puntland,uuna jecelyahay marka hore inuu helo faham buuxda oo la xiriirta dastuurka.
Nabadoonka ayaa sheegay inuu rajaynayo dastuurkan inuu noqon doono mid bulshada u horseedi doono horumar la taaban karo.
Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan ayaa isagu ka sheegay kulankii maanta intii uu socday inuu siweyn ugu faraxsanyahay hanaanka shaqo ee gudiga doorashada Puntland,waxaana uu kula dardaarmay inay ka miro dhaliyaan sidii dalka uu ugu hir gali lahaa nidaamka axsaabta badan.
Waxaa uu sheegay maamul ahaan inaysan ogolaan in aragti qaldan laga bixiyo dastuurka cusub ee Puntland,isagoona ku dooday dastuurka inuu maray habkii dastuur ee looga baahnaa ayna soo turxaan bixiyeen da aqoon u leh dastuurka,waxaana uu bulshada kula dardaarmay inay taageeraan hormarka ay wadaan maamulka.
“Cid kasta oo isku dayda bulshada inay qalado ama si qaldan wax u tarjunto indhaha ka laaban mayno gacan bir ah ayaan ku qabanaynaa ayuu yiri”gudoomiye Galan.
Shirka maanta ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay Siyaasi Barqad Cali Saalax oo sheegay dowladda inay qaadayso talaabo kasta oo nidaamka xisbiyada badan lagu soo dabaali karo deegaanada Puntland iyadoona laga gudbayo nidaamka beelaysan ee uu ku dhisanyahay maamulka Puntland.
Dastuurka cusub ee dowladda Puntland ayaa qeexaya inuu dhaqan gal noqon karo marka ugu horaysa ee loo qaado afti dadwayne,hase ahaatee baarlamaanka Puntland ayaa ka-fadhigoodii ugu dambeeyay ee dhawaan ku yeesheen magaalada Garoowe waxaa ay ku ansixiyeen dastuurka inay ansixinayaan ergooyin laga soo dhex xulayo dadwayanaha.